I-Hypothyroidism sisifo esenzeka xa idlala lengqula livelisa incinci okanye lingabikho kwahomoni. Idlala lengqula linceda ukulawula ubushushu bomzimba, ukubetha kwentliziyo, ukukhula, kunye nendlela umntu azuza ngayo okanye anciphise umzimba.
Yintoni eyonyusa umngcipheko wehypothyroidism?
Isifo somzimba, njengesifo sikaHashimoto okanye uhlobo lweswekile 1
Unyango ngemitha okanye utyando lwe-thyroid
Imbali ye-hypothyroidism, umhlaza we-thyroid, okanye i-thyroid gland eyandisiweyo
Imbali yosapho ye-hypothyroidism okanye isifo se-autoimmune
Amanqanaba e-iodine asezantsi
Zeziphi iimpawu kunye neempawu zehypothyroidism ngexesha lokukhulelwa?
Ukudinwa, ukudakumba, okanye ukucaphuka
Ulusu olomileyo, olucekeceke, iinzipho ezibukhali, okanye iinwele ezibuthathaka
Intlungu okanye ubuthathaka kwiimisipha
Ukudumba idlala lengqula
Ichongwa njani i-hypothyroidism?
Ugqirha wakho uya kukubuza malunga neempawu zakho kwaye akuvavanye. Banokubuza ukuba ngawaphi amayeza owasebenzisayo. Mxelele ngembali yakho yezonyango kwaye ukuba nabani na kusapho lwakho une-hypothyroidism. Uvavanyo lwegazi luya kwenziwa ukujonga inqanaba lakho lehomoni yedlala lengqula.
I-hypothyroidism iphathwa njani?
Amayeza e-thyroid aya kuzisa inqanaba lakho le-thyroid kwinqanaba le-thyroid. Idosi inokuhlengahlengiswa ngexesha lokukhulelwa. Inqanaba lakho lehomoni ye-thyroid liya kujongwa rhoqo ukuqinisekisa ukuba ufumana idosi echanekileyo. Unokufuna i-iodine supplements okanye utye ukutya okuphezulu kwi-iodine. Buza ugqirha wakho ngolwazi olungakumbi malunga namanye amayeza onokuwadinga.
Ipilisi emhlophe embhoxo m365
Ndingayilawula njani i-hypothyroidism?
Fumana iodine engakumbi. Idlala lengqula lisebenzisa iodine ekusebenzeni kakuhle nasekuveliseni iihomoni zedlala lengqula. Ugqirha wakho uya kukuxelela ukuba utye ukutya okune-iodine eninzi. Ukongeza, iya kubonisa izixa ekufuneka uzisebenzisile koku kutya. Ubisi kunye ne-shellfish yimithombo elungileyo ye-iodine. Unokufuna ezinye izongezo ze-iodine.
Gcina umkhondo wokuhamba kosana lwakho. Gcina umkhondo wokuba zingaphi iintshukumo eziviwa lusana lwakho yonke imihla. Linda iyure enye emva kokutya. Bhala phantsi yonke intshukumo oziva ngayo kusana lwakho.
Gcina umkhondo woxinzelelo lwakho kunye nobunzima bomzimba:
Thatha uxinzelelo lwegazi kwaye ubhale phantsi amaxabiso rhoqo njengoko bekuxelele. Kubalulekile ukuba uxinzelelo luthathwe kwingalo enye kwaye kwindawo enye ngalo lonke ixesha. Rekhoda ufundo lwakho loxinzelelo, kunye nomhla kunye nexesha owathathe ngalo. Thatha le rekhodi uye nayo kutyelelo lwakho lwaphambi kokubeleka.
Zilinganise mihla le Phambi kwesidlo sakusasa emva kokuchama. Ukufumana ubunzima obungaphezulu kokucetyiswayo ngexesha lokukhulelwa kunokuba luphawu lokuba kukho ulwelo oluninzi emzimbeni wakho. Gcina umkhondo wobunzima bakho bemihla ngemihla kunye notyelelo lwakho lwaphambi kokubeleka.
Uyapasa okanye uxhuzule.
Unesihlungu esifubeni ngokukhawuleza okanye ukuphefumla okufutshane, okanye ukudumba emilenzeni, emaqatheni okanye kwiinyawo.
Amanzi akho ayaphuka, okanye wopha kwilungu lobufazi.
Unorhudo, ungcangcazela, okanye unengxaki yokulala.
Uziva ngathi usana lwakho luyabhabha kwaye luyakhaba ngalo lonke ixesha okanye ngokuchaseneyo luhleli kakhulu kwaye alushukumi kwaphela.
Ukwehla emzimbeni ngaphandle kokuzama.
Iimpawu kunye neempawu zakho ziyabuya okanye ziba mandundu.
Iyeza lakho lengqula liyaphela.
udlala njani iintliziyo
Ungayitshisa njani i-cd kwi-spotify
Yitsho oonobumba ngesiSpanish
iliso elinye libuthathaka kunelinye
Iziphumo ebezingalindelekanga zescopolamine
Ishedyuli yeedepatitis b